कुन बैंकको स्थापना कहिले र चुक्ता पुँजी कति छ ? सीइओकाे तलबभत्ता कति ? | Artha News Nepal
Home	फिचर	कुन बैंकको स्थापना कहिले र चुक्ता पुँजी कति छ ? सीइओकाे तलबभत्ता कति ?
फिचरबैंकिङवाणिज्य बैंकविकास बैंक
कुन बैंकको स्थापना कहिले र चुक्ता पुँजी कति छ ? सीइओकाे तलबभत्ता कति ?
by अर्थन्यूज पुस २८, २०७७
नेपालमा हाल २७ वाणिज्य बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् । बैंकहरुलाई कसरि अगाडी बढाउने भन्ने प्रमुख हात उक्त बैंककाे सीइओको हुन्छ । बैंक संचालनको भार बोक्ने सीइओहरुको सेवा सुविधा कति हुन्छ सबैमा उत्सुक्ताको विषय हुन्छ । २७ वाणिज्य बैंकमध्य केहि बैंकका सीइओहरुको सेवासुविधा यस्तो छ ।
अनिल केशरी शाह नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनलाई नेपालको सेलिब्रेटि बैंकरको रुपमा पनि चिनिने गरेको छ । नबैंल बैंक सन् १९८४ मा स्थापना भएको हाे। बैंकको हालको चुक्ता पुँजी १० अर्ब १० करोड रहेको छ जुन नेपालमा संचालित वाणिज्य बैंकहरुमा ८ औं स्थानमा पर्न आउछ । नेपालका धनाड्य बिनोद चौधरीले संचालनमा ल्याएको बैंकका सीइओ अनिल केशरी शाहले गतवर्ष १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता वापत बुझेका छन् ।
अशोक शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुुन् । यो बैंक नेपालमा रहेका २७ बाणिज्य बैंकमध्य चुक्ता पूजिको हिसाबले सातौँ नम्बरमा पर्छ । सन् २०१६ बाट सेवा सुरुगरेको बैंकले छोटो समयमानै आफ्नो चुक्ता पुँजी १० अर्ब ३२ करोड बनाएको छ । यस बैंकका सिइओ शेरचनले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ३ करोड ४२ लाख ९२ हजार तलब भत्ता बुझेका छन् । उनले गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १ करोड ८० लाख ७४ हजार रुपैयाँ तलब वापत,कर्मचारी बोनस वापत २३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ तथा दशैं भत्ता र बिदा वापत २५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । यो वर्ष उनले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १ करोड १३ लाख बढि सुविधा लिएका छन् ।
रोशन न्यौपाने एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । पछिल्लो समय आफ्नो शाखा विस्तारलाई आक्रमक बनाउदै आएको बैंक सन् २०१३ मा स्थापना भएको हो । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । चुक्ता पुजिको आधारमा यो बैंक नेपालमा हाल संचालनमा रहेका बैंकहरुमध्ये १२ औं स्थानमा रहेको छ । यस बैंकमा कार्यरत सिइओ रोशन न्यौपानेको एक वर्षको तलब भत्ता गरि गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ५० लाख वुझेका थिए ।
ज्योति प्रकाश पाण्डे
ज्योति प्रकाश पाण्डे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । सन् १९८६ मा स्थापना भएको बैंकको हालको चुक्ता पूजी १४ अर्ब २५ करोड रहेको छ । चुक्ता पुँजीको आधारमा यो बैंक २७ वाणिज्य बैंकमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यस बैंकका सीइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेले ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता वापत लिएका छन् । उनले एकवर्षको तलब मात्रै एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । भने अन्य सुबिधा मार्फत १ करोड ४६ लाख प्राप्त गरेका छन् ।
भुवन कुमार दाहाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन । सन् २०१२ मा स्थापन भएको यस बैंकको हालको चुक्ता पूजी ८ अर्ब ८० करोड रहेको छ । यो बैंक चुक्ता पुँजीको आधारम २० औं स्थानमा रहेको छ । यस बैंकमा कार्यरत सीइओ भुवन कुमार दाहालले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता वापत बुझेका थिए ।
शोभनदेव पन्त बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो बैंक २०१६ मा स्थापना भएको थियो भने यसको हालको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५५ करोड रहेको छ । बैंकका सीइओ शोभनदेव पन्तले एक वर्षमा तलब भत्ता गरि २ करोड ८१ लाख ३ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।
सुनिल केसी एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । बैंकको हालको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । यो बैंक चुक्ता पूजिको हिसाबले २७ वाणिज्य बैंक मध्ये ५ औं स्थानमा रहेको छ । यो बैंक सन् २०१५ मा स्थापना भएको हाे । यस बैंकको सीइओ सुनिल केसीले गत आर्थिक वर्षमा तलब भत्ता गरेर २ करोड ९ हजार बुझेका छन् । जसमा उनले भत्ता वापत ५२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
सन्तोष कोइराला माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । सन् २०१२ मा स्थापना भएको बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४६ करोड रहेको छ । बैंकका सीइओ कोइराला र सुमन शर्माले गरि एकवर्षमा २ करोड २३ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । कोइरालाले वैशाख १ गतेदेखि सीइओको पद समालेका हुन् ।
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । सन् १९९४ मा स्थापना भएको बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५० करोड रहेको छ । बैंकका सीइओ ढुंगानाले गतवर्ष तलब बापत मात्रै १ करोड ४१ लाख बुझेका छनभने उनको अन्य सुविधाको बारेमा कुनै जानकारी दिईएको छैन् ।
सुरेन्द्र भण्डारी कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ५५ करोड रहेको छ । बैंकले सन् २००१ बाट सेवा सुरुवात गरेको थियो । बैंकका सीइओ भण्डारीले गत वर्ष तलब भत्ता वापत २ करोड ३८ लाख ३१ हजार बुझेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा तलब वापत मात्र १ करोड ७ लाख ४७ हजार बुझेका थिए।
अनुपमा खुन्जेली मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो बैंक वाणिज्य क्षेत्रमा नया भएपनि यसको चुक्ता पुँजीभने १० अर्ब ३९ करोड रहेको छ । बैंक सन् २०१८ मा स्थापन भएको हो । बैंकको सीइओ खुन्जेलीले एक वर्षमा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ तलब भत्ता वापत बुझेकी छन् । उनी वाणिज्य बैंकमा हाल कार्यरत सीइओमध्य एक मात्र महिला सीइओ हुन् ।
गणेश पोखरेल सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । ८ अर्ब ६२ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको स्थापना सन् २००७ मा भएको थियो । बैंकका सीइओ पोखरेलले एक वर्षको अवधिमा १ करोड ३१ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा तलब वापत मात्र ८४ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।
अजयबिक्रम शाह लक्ष्मी बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो बैंक सन् २००२ मा स्थापना भएको हो । यो बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८१ करोड रेहेको छ । बैंकका सिइओले शाहले एक वर्षमा तलब भत्ता गरि १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।
विदेशी लगानीबाटनै संचालनमा रहेको एसबीआइ बैंककोे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकुल भट्नाकर हुन् । यो बैंक नेपालमा १९९३ मा स्थापना भएको हो यस बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ९६ करोड रहेको छ । बैंकका सीइओ भट्नाकरले एक वर्षमा तलब बाटमात्र १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।
जनक पौडेल सनराइज बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो बैंक सन् २००७ सालमा स्थापना भएको हो। बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ९७ करोेड रहेको छ । बैंकका सीइओ पौडेलको एक वर्षको तलब भत्ता १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
रत्नराज बज्रचार्य ग्लोबल आईएमई र्बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । बैंकले आथिक बर्ष २०७६/७७ मा तलब भत्ता गरि १ करोड २६ लाख ८६ हजार रुपौयाँ बुझाएको छ । यो रकम जनता बैंकका सीइओ परशुराम कुवारले मंसिर २० सम्म पाएको र हालको सीइओ ले पाएको तलब भत्ता वापतको हो । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक मर्जर भएर हाल नेपालमा संचालनमा रहेका बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढि चुक्ता पूजि रहेको बैंक बनेको छ । यो बैंकको हालको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ९८ करोड रेहेको छ ।
अनिरभ घोष देशार
अनिरभ घोष देशार विदेशी लगानीमा संचालीत स्ट्यान्डर्टर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो बैंक नेपालमा सन् १९८७ बाट संचालनमा आएको हो । यो बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १ करोड रहेको छ । बैंकका सीइओ घोषले एक वर्षमा तलब भत्ता वापत २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।
ajybikram shahanil keshari shahanukul bhatnagaranupama khunjelashok sherchanbanks of nepalbhuwan kumar dahalceos of bankscommercial banks of nepalganesh pokhrelgyanendra dhunganajanak poudeljyoti prakash pandeynepal bangladesh banknepali banksnmb bankratnaraj bjracharyaroshan neupanesantopsh koiralashobhan dev pantsunil kcsurendra bhandari